I-Skugketi yayisetyenziselwa ukuhlaziywa kwintsapho, kungekudala, kodwa yaziwa ngokubanzi kumazwe amaninzi. Ewe, iintaka zehlathi zaseNorway zihlakaniphile, zithandwa kwaye zidlala. Ezi nkati ixesha elide zizisebenzisa kubantu abangaziwayo, kodwa xa zixhomekeke, zihlala zinyanisekile kubanikazi babo ubomi. Zixhaswe kwaye zizimeleyo, kwaye ngelo xesha zivakalelwa kakuhle abanini, abanakho "ukubaphatha" ngokufudumala kwabo. Zinenwele ezimangalisayo, kodwa zifuna ukunakekelwa kwimihla ngemihla. Nangona kunjalo, ukuba unquma ukuba nesilwanyana ekhaya, ufuna ukwazi yonke into malunga nohlobo lwentaba yaseNorway.
Ikati yaseNorway yaseNorway (isicutchet) isilwanyana esinamandla, esisebenzayo, ngokuqhelekileyo sifinyelela ubungakanani obukhulu kakhulu. Ezi zinja zihamba kwaye zidlala, ziyakuthanda ukunyuka kwemithi kwaye ivumelane kakuhle neemeko ezintsha. Ngokwemvelo bayizingeli, ngoko bafumana amagundane ngokuzonwabisa. Ngenxa yesi sizathu, ukuba unesikoloti, akufanele uqalise iigorane ezincinci okanye iintaka ekhaya. Nangona kunjalo, la makakati anesimo sengqondo "sasendle" - abagibeli bavame ukuthanda kunye neendawo, ngoko musa ukuzigcina ixesha elide kwiindawo zokuhlala.
Kukholelwa ukuba lolu luhlobo olukhethekileyo lweekati lwakhiwa phantsi kwefuthe lemozulu yemozulu yamaScandinavia. I-Skugketki sele idlulelwe ngabantu baseNorway, la maqabane angabonakaliyo nabangenakuthobela abaphethe iigundane, kuba zihlala zifumaneka kwiifama zaseNorway. Olu luhlu lwaqala ukutshabalalisa, kwaye-ukuwela ngeenkampu zaseYurophu ezinomsindo, kuba ukususela ekuqaleni kwee-thirties abantu baqala ukukhula.
Uboya beenjaba zinendawo yokuphinda amanzi, ngenxa yokuba imvula ayisebenzanga imanzi. I-skugkettes inengubo ephindwe kabini, iingubo zide kwaye ziluhlaza. Ikati idinga ukudibaniswa imihla ngemihla, ukuze uboya alufaki kwiikhoyili. Ukudibanisa ngokuqhelekileyo kuyathandwa kakhulu ngeekati. Iingcaphephe ngokucokisekileyo kufuneka zidibaniswe ngasekupheleni kwentwasahlobo, xa ziqala ukukhupha ngamandla. Emva kokuba i-underwear iwa phantsi, unokuyifumana kangangoko, kuze kube yilapho "ingubo" yasebusika ikhula kwakhona ekuwa kwekati. Iikati zasehlathini zaseNorway zibonakaliswa nobukho be-collar bobo, obubonakala ngokugqithisileyo ngexesha le-moult, likhula kwakhona kuphela ngekwindla. Ubunjani boboya be-scaghetti buxhomekeke ngqo kwiimeko zokuphila kwabo: kwiikati ezihlala zihlala ngaphakathi, uboya buncinci, buncinci kwaye bufutshane.
Ezi ikati zineendlebe ezimangalisa kakhulu - ifomati, ifom ekhangelekileyo, isetyenti ephezulu entloko kunye neengqungquthela ezintle kwiingcebiso. Intloko ye-scaghetti iyinxantathu, kunye ne-cheekbones eyaziwayo kunye namabala amakhulu, atyalwe ngokubanzi. Umsila ude, uhambahamba, up pubescent. Ngokwemigangatho, impumlo yeekati kufuneka ibe yinde kwaye ilungele, ngaphandle kwesihlalo.
Kwi-skugketov vumela naluphi na umbala kunye nephethini kwiboya, kodwa ngokuphindaphindiweyo kwisifuba kunye ne-paws kulawo makati kukho uboya obomhlophe. Kwakhona kwaphawula ukuba kwiikati ezinephethini yebhondi, uboya bukhulu kakhulu kwaye bude ngaphezu kwebicolour okanye i-monochrome scagbets.
Ngokomgangatho, umbala wamehlo we-scotties kufuneka ufanisane nombala.
Kulula ukuzalisa iikati zaseHorgium zehlathi - i-scottish zinamandla ngokwemvelo, ngenxa yokuba zivelisa iikiti ngokulula kwaye zizinyamekela zabo inzala. I-scitthetti ye-Kittens-ephathekayo kunye neyadlalayo, ayifumaneki kakhulu kwizifo ezahlukahlukeneyo. Ingubo, efana nesilwanyana esikhulileyo, iqala ukudala kwiminyaka emithathu ukuya ezintlanu.
Ikati elidala laseNorway laseNorway lilinganisa ukuya kwiihilogram eziyisihlanu ukuya kwezixhenxe, iikati - ingaphantsi.
Unokufaka isicelo seengcebiso ezingakumbi kwiindawo ezizodwa, apho uza kuxelelwa konke malunga nohlobo lweentaka zase-Norway.
Ezi nkati zihamba kakuhle kunye nabantwana, kodwa kufuneka ukhumbule ukuba i-scagbets ayithandi ukuyifumba kwaye ikhonxwe. Kodwa uthando xa zithwele iinwele. Abafuni ukuhlala ngamadolo abo kunye nabanikazi, kodwa bahlala behlala ngokukhawuleza.
Kukholelwa ukuba ezo nkati ziyakwazi "ukuphatha" imikhosi, ukuchonga ngokuchanekileyo iindawo ezibuhlungu.
Ukuba unquma ukuqala ikati yaseNorway yaseNorway, khumbula ukuba ezi zilwanyana zixhomekeka kakhulu kubantu. Kodwa nangona kunjalo, bayakwazi ukunyamezela ukuhlukana okufutshane, ukuhlola indawo esitsha okanye ukubeka uboya babo. Iincama zehlathi zaseNorway zihlala ziqhotyoshelwe kakhulu kubanikazi ukuba zilandela yonke indawo.
Ukuthuthwa kwezilwanyana ezifuywayo kwindiza
Kuthekani ukuba umntwana uyamoyika izinja?
Inja ye Moody
Izinja ezimnandi kunye nezincinci
Inkxalabo ebudlelwaneni phakathi kwendoda nomfazi
Kunokuba i-herpes iyingozi ngexesha lokukhulelwa
Ubomi bomntu siqu kaValentina Tolkunova
Indlela yovuyisana nomfana kunye nosuku lukaValentine